Mpanamboatra sy mpamatsy idler - China Idler Factory
Mpanaraka dia mpitari-dalana ary fitaovana hanitsiana ny fihenjanan-dàlana ho an'ny fivorian'ny rohy. Ny mpangataka BONOVO dia masinina mazava tsara avy eo notsaboina, nohosorana ary nasiana tombo-kase mba hanome fiainana maharitra azo antoka.
Ny mpandeha eo an-toerana tena manara-penitra dia afaka mampihena ny adin-tsaina ary mampihena ny enta-mavesatra mba hanitatra ny androm-piainany manontolo.
Idler dia miantoka ny fananana mekanika tena tsara, ny tanjaka avo ary ny fanoherana amin'ny famonoana sy ny vaky tsara amin'ny alàlan'ny famonoana sy ny fizotrany.
Ny idler dia misy akorandriaka, zana-kazo, fonosana, bimetallika ary singa famehezana. Izy io dia vita amin'ny alàlan'ny fanariana na fametahana, fametahana milina, fitsaboana hafanana, fivoriambe, fanaovana hosodoko, sns.
Mampiasà teknolojia fanodinana mazava tsara sy teknika fitsaboana hafanana manokana hahatratrarana ny fanoherana tsara indrindra ary hanananao ny fahaiza-manao betsaka indrindra ary koa ny famonoana olona.
Ny kodiarana malaina dia manana endrika mahitsy ary novokarina tamim-pitandremana. Azo amboarina tsara izy io ary mora vahana hatramin'ny 50 taonina amin'ny andraikitra mavesatra nefa tsy misy fiatraikany amin'ny fandidiana mahazatra ny excavator. Kalitao azo antoka, mahomby, ary serivisy avo lenta. Ny vokatray no safidinao tsara indrindra.
Ny hamafin'ny ambonin'ilay miasa dia HRC56-62, izay afaka mampihena ny abrasion ary manitatra ny androm-piainan'ny serivisy. Amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny faharetan'ny vokatra dia manome lanja ny vokatrao izy io.
Mpanaraka dia mpitari-dalana ary fitaovana hanitsiana ny fihenjanan-dàlana ho an'ny fivorian'ny rohy.
Ny kalitaon'ny fiainana sy ny serivisy dia miankina amin'ny kalitaon'ny vy vita amin'ny vy, ny hamafin'ny velaran'ny lalamby, ny halalin'ny sosona henjana ary ny kalitaon'ny vondrona famehezana.
Idler, fantatra koa amin'ny anarana hoe vondrona idler, assemblue idler, idler na idler, dia ampahany amin'ireo singa fitaovam-piantsonana ho an'ny fitaovana mavesatra mpikotrana (toy ny excavator, bulldozer, crane, drills, sns.).